Mapundu panhengo dzakasiyana dzemuviri anoratidza zvirwere zvakasiyana. – Noor Health Life
Mapundu panhengo dzakasiyana dzemuviri anoratidza zvirwere zvakasiyana.
Nzira yekuwana mapundu pamuviri wedu ndeyechisikigo asi kana vakatanga kuwedzera pane imwe chikamu zvino vanoratidza chirwere.
Kana mapundu akaonekwa pachikamu ichi, chiratidzo chekukuvadza kune adrenal glands.
Kunyanya kushanda nesimba uye kunetseka kunogona kukonzera mapundu pachikamu ichi chemuviri.Zvinoratidzawo kuti masoja emumuviri apera simba saka usazvidya moyo udzikame.
Noor Health Zindagi ari kuedza kuwana zvakanakisisa kubva kwauri uye vanachiremba vakuru vane Noor Health Zindagi. Chiremba wokuvhiya Consultant. Mapurofesa. Kushanda Noor Hutano Hupenyu kunobatsira varombo uye tinokukumbirai kuti mutore chikamu mubasa iri nekutsigira Noor Hutano Hupenyu. verenga zvimwe.
Kana kuputika kuchionekwa pachipfuva, zvinoreva kuti chirongwa chako chekudya hachina kushanda zvakanaka uye iwe unofanira kuchinja kudya kwako.
Chinokonzera mapundu kushaikwa kwevhitamini.Izvi hazvireve kuti unofanira kutanga kutora mavhitamini ekuwedzera asi gadzirisa kushomeka kwekudya.
Chikonzero cheizvi kuwedzera kwehuwandu hweshuga mumuviri.Naizvozvo, usashandise shuga yakawanda nechingwa, asi gutsikana nemiriwo nemichero.
Pamusoro pemakumbo uye pasi pemuviri
Kana uri kushandisa sipo isingaenderane neganda rako, panobuda mapundu panzvimbo iyi, saka tarisa sipo yako.Chimwe chikonzero chinogona kunge chiri cheganda.
Chikamu chepamusoro nepakati chechiuno
Kana usiri kurara zvakakwana ipapo mapundu anoonekwa munzvimbo ino, zvakafanana iwe uri kudya chikafu chakapfuma mumacalorie.
Chinokonzera mapundu idambudziko zvakare rekugaya chikafu.Zvinoratidzawo kuti hausi kudya chikafu chakanaka. Zvinokonzera uye kurapwa kwemapundu.
Kazhinji hatizive kuti sei tichiita mapundu kumeso.hapana chikonzero chaicho chinoita kuti mazino aumbe asi panogona kunge paine zvikonzero zvakawanda.zvimwe zvikonzero nemarapirwo azvo ndezvizvi.Ngatikurukurei nezvazvo.Tell you in mamwe mashoko.
Kushaikwa kwekudya kwakadzikama uye kudya kwakawanda kwecarbohydrates yakachena kunogona kukonzera mburwa chero zera.Kudya zvine mwero uye kudya zvine index yakaderera yeglycemic zvakakosha.Vatsvakurudzi vanoti insulin yakawanda muropa inogona kukonzera kugadzirwa kwemafuta akawandisa. uye kuzvimba follicles.Iwewo unogona kuita kuti kudya kwako kuve neutano uye kudzikamisa.
Technologies yechizvinozvino inonzi blue light therapy irikushandiswa nhasi kubvisa mapundu kumeso.Izvi zvine simba zveblue rays zvinopinda muganda nemumafollicles zvouraya bacteria.Anogona kukonzera kutsvuka paganda asi zviri temporary,saka kana budget yako ichitendera. , mushonga uyu wakanakira kubvisa mburwa uye kuwana ganda rakajeka.
Mafuta emuti wetii ane mukurumbira uye akapfava akaenzaniswa nebenzoyl peroxide anobatsira kurapa marudzi ese ezvigwere pamazera ese.Tea tree oil ine natural antiseptic properties inonatsa mapores akavharika neganda.Inodzivirirawo kuburitswa kwemafuta akawandisa pamusoro, uye inoderedza kuzvimba kweganda.Mafuta aya anoshandiswawo muzvizoro zvakawanda, kugeza kumeso nesipo.
Sekutaura kwedermatologists pamwe nenyanzvi dzezvehutano, kuderedza huwandu hwemunyu mukudya kwako.Noor Health Life inoti chimwe chezvikonzero zvikuru zvinokonzera acne kunwa sodium yakawanda.Chengetedza paunenge uchidya.Zvingave nani kuti udye zvishoma pane 1500 mg ye sodium zuva nezuva.
Stress inokonzeresa kuita kwemahormones.Stress haina chayakananga paganda asi chero uchinetsekana,mapundu anobuda paganda rako.Kuwedzera kunokanganisawo magland anobuditsa mafuta mumuviri.Meditation,exercisement or any other nzira inogona kushandiswa kuderedza kushushikana kunogona kudzikamisa mamiriro ako epfungwa.
Kuti zvive nemigumisiro yakanaka, zvakakosha kuonana nedermatologist yakanaka nekuchinja kwakakodzera mukudya kwako uye mararamiro ako.Zvirwere zvinoonekwa paganda.
Zviratidzo zvekutanga zvezvimwe zvirwere zvinoonekwa paganda.
Ganda ndiro nhengo hombe yemuviri wemunhu asi waiziva here kuti rinofanotaura zvirwere?
Hongu, zviratidzo zvekutanga zvezvimwe zvirwere zvinoonekwa paganda.
Asi iwe unoziva zviratidzo izvo ganda rinoratidza kune zvirwere zvakasiyana-siyana?
Zvinowanzotendwa kuti bursitis ndeyekuita kwekunwa mukaka mushure mekudya hove, asi sayenzi yezvokurapa inoramba izvi.Kutaura zvazviri, inoitika apo ganda rinoratidzwa kune zvakasikwa Masero epigment anomira kuburitsa zvinhu zvine pigmented.Kuonekwa kwemavara machena anooneka. paganda chaizvoizvo kurwiswa kwemasero eganda nemasoja omuviri anodzivirira zvirwere, ari pamelanin, pigment inopenda ganda.Inogonawo kuva chiratidzo chezvirwere zvinodzivirira muviri zvakadai sehosha yethyroid.
Makwapa akaoma, kuvava, uye akatsvuka paganda kazhinji anooneka pedyo negotsi kana mumagokora.Chirwere cheganda chinowanzobata vana nevakuru, asi chinogonawo kuva chiratidzo chezvinetso zvepfungwa. Maererano neongororo yeUnited States, vanhu vane kuora mwoyo kana kushungurudzika vanowanzotanga chirwere ichi, asi kurapa dermatitis kunovandudza hutano hwepfungwa.
Shuga yakakwirisa muropa kwenguva refu inogona kukanganisa kufamba kweropa uye kukanganisa tsinga, zvokanganisa kukwanisa kwemuviri kuporesa maronda, kunyanya emumakumbo, izvo zvinogona kukonzera chirwere cheshuga.Inonziwo fistula.
Muchirwere cheganda ichi, makanda anoonekwa paganda uye kukwenya nekukwenya, asi zvakare anonongedzera kune mamwe matambudziko akakomba ekurapa. Maererano nenyanzvi dzezvokurapa, vanhu vane chirwere ichi vane mukana we58% wepamusoro wehosha yemwoyo uye 43% yengozi yepamusoro yesitiroko. Vanamazvikokota vanoti psoriasis nemagwamba eropa mutsinga anokonzerwa nekuzvimba uye chinhu ichi chinobatanidza zviviri izvi.
Pink tsanga kana yunifomu
Chirwere ichi chinoita kuti ganda rive dzvuku uye kuputika kwepink kuonekwe, vanhu vazhinji havazvirape nekuti havafungi kuti zvinokuvadza, asi chidzidzo chitsva chakawana kuti mamiriro acho akawedzera njodzi yedementia muvakadzi ne28%. zera racho rinopfuura makore 50 kana kuti 60.
Makumbo ane ganda rakaoma uye rakatsemuka
Izvi zvinogona kuva chiratidzo chezvinetso nechirwere chetachiona (kunyanya mazamu ari pedyo nemhepo), kunyanya kana zvisingabatsiri kutarisira unyoro mutsoka. Kana paine dambudziko muthyroid gland, haikwanise kuburitsa mahormone ethyroid anoshanda kune metabolic rate, blood pressure, muscle development uye nervous system. Maererano neongororo yezvokurapa, semugumisiro wematambudziko eThai Ride, ganda rinooma zvakanyanya, kunyanya ganda retsoka rinotanga kuputika uye zvinongobatsira kuona chiremba kana mamiriro acho asina kunaka.
Kunyanya kudikitira pamaoko kunogona kutungamirira kuchirwere chethyroid pamwe nekunyanya kudikitira, umo mazamu e sweat anowedzera kushanda. Vanhu vazhinji vanosangana nedambudziko iri muchikamu chimwe kana zviviri zvemuviri zvakaita semuhapwa, zvanza kana tsoka. Vanachiremba vanogona kuiongorora uye kurayira kurapwa.
Mapundu matema kana mapundu
Kazhinji, dema dema kana mabumps ane mukurumbira anogona kuve chiratidzo chegomarara reganda, nepo achiwedzera njodzi yegomarara rezamu, dundira uye kenza yeitsvo. Maererano nenyanzvi, kufamba zvishoma muzuva, kugara uchishanda, kudya kune utano uye kugara kure nedoro zvakakosha kuti udzivise kenza inouraya yakadai.Kune mimwe mibvunzo nemhinduro, bata Noor Health Life ne email uye pa can. noormedlife@gmail.com